ဝါးခယ်မ : ယခုတစ်လော နာမည်ကြီးသော ၀န်ကြီး တစ်ဥိး ပြောသမျှ နှင်. သူတို.အမြင်
ယခုတစ်လော နာမည်ကြီးသော ၀န်ကြီး တစ်ဥိး ပြောသမျှ နှင်. သူတို.အမြင်
ဒီ ခေါင်းစဉ် လေးနဲ.ပတ်သက်ပြီး ဂျာနယ်တွေ ၊ On Line Media တွေ ၊အသံလွှင်.ဌာနတွေ ၊အခမ်းအနားတွေ မှာ ပြောဖြစ်ကြတဲ့ အလွှာစုံ ၊နေရာစုံ၊ယုံကြည်ချက်အစုံ အအသံတွေ ၊စကားလုံးတွေကို အကြောင်းအရာတူတွေ ၊အကြောင်းအရာတူ အမြင်မတူတွေ ၊တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းရဲ. အမြင်စုံတွေ စသည်ဖြင်. လက်လှမ်းမှီသမျှစုစည်း ဖော်ပြ မှာဖြစ်ပါတယ် ၊ ဒီလိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ မူရင်း ပြောဆို ၊ရေးသား ၊တွေးခေါ်မှု သက်သက်ကိုသာ ဖော်ပြမှာဖြစ်ပြီး ဒါတွေဟာ မူရင်း ကာယကံရှင် ရဲ. ယုံကြည်မှုနဲ. ခံယူချက်သာဖြစ်ပါတယ် ၊Blog အနေနဲ.တော.သာမာန်ထက် ထူးခြားတယ်ထင်တာမျိုး ၊လက်ရှိအခြေအနေ တစ်ရပ် ၊ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ၊လှုပ်ရှားမှု တစ်ခု၊ယုံကြည်ချက် တစ်ရပ် ကိုဖော်ပြတယ်လို. ယူဆတာတွေကို ရွေးချယ် ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ဒိနေ.လုပ်ရပ်ဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ သမိုင်းပါ ၊ဒီနေ.ပြောတာဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ ကိုယ်. ဘ၀ကို အရောင်ထွက်စေမှာ ၊အရိပ်ထိုးစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်လုပ်ကြတာ ၊ပြောကြတာ အားလုံးကို ကိုယ်တာဝန်ယူ ထားပြီးသား ဖြစ်ကြ မယ်လို. ယုံကြည်ပြီးသားပါ ၊ ၊ဒီလိုပြောကြ ဆိုကြ လုပ်ကြတာ အားလုံးကိုလည်း လေးစားပေးရမှာပါ ၊မှားသည် မှန်သည် မဝေဖန်လိုပဲသမိုင်းအတွက် မှတ်တမ်း တစ်ခုအနေနဲ. ပါဝင်ပြုစု ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည် ။သမိုင်းက ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ်.မည် ..............
အခြေခံလူတန်းစားတွေ တိုးတက်လာမှသာလျှင် တိုင်းပြည်က အေးချမ်းမယ်။ တိုင်းပြည်နောင်ရေး စိတ်အေးရမယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ အဲဒါ လုပ်ရမယ့်ကိစ္စပဲ။ ပညာတတ်တွေလည်း ပေါ်ထွန်းလာအောင် လူကြီးတွေက တော်တော်ကို လုပ်ကြရမယ်။ တက္ကသိုလ်ကြီးတွေ ဆောက်ပေးခဲ့တယ်။ စာသင်ကျောင်းတွေ ဆောက်ပေးခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လည်း အခြေခံဖြစ်တဲ့ ဒေသအသီးသီးက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီး ရောက်လာတဲ့လူက စာမှမတတ် ဆယ်တန်းမှ မအောင်ဘဲ လွှတ်တော်ထဲ လာထိုင်တော့ သူများထဆို မတ်တတ်ထနေတယ်။ သူများထိုင်ဆို ထိုင်နေတယ်။ သူများ ခလုပ်နှိပ်ဆို နှိပ်တယ်။ သူမှ ဘာမှမသိတာ။ ဘာတွေပြောနေလဲ သူနားလည်တာ မဟုတ်ဘူး။ ရမ်းလုပ်နေရတာ။ အဲဒီဟာတွေကို ဒေသအလိုက် နယ်ပယ်အသီးသီးက ပညာတတ်တွေ ထွက်ပေါ်လာအောင်ဆိုပြီး လုပ်ပေးခဲ့တယ်။
Hot News.ဂျာနယ် အယ်ဒိတာချုပ် မမ နှင်.လည်/ဆည်ဝန်ကြီးဦးမြင်.လှိုင် အင်တာဗျုး
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ထုတ် Hot News ဂျာနယ် အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၈၄)....
ယခင်ရှိရင်းစွဲအကြွေးတွေကိုလည်း စားစရာမရှိ လျော်စရာရှိ ဆိုသလိုပေါ့။ ငါ့အကြွေး မြန်မြန်ကျေအောင် ထမင်းတစ်နပ် လျှော့စားမယ်။ ဒီလိုဆို တစ်လပြည့်ရင် ဘယ်လောက်ဆပ်နိုင်မလဲ။ ခြောက်လပြည့် ဘယ်လောက်ဆပ်နိုင်မလဲ။ ငါ့မိသားစုနှင့်အတူ လျှော့စားမယ်။ ဥပုသ်စောင့်တဲ့ သဘောပေါ့။ ကုသိုလ်လည်းရ၊ ၀မ်းလည်းဝပေါ့။ ဥပုသ်စောင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆို အကြွေးကျေသွားမယ်။ အကြွေးမကျေရင် သံသရာထဲက မလွတ်နိုင်ဘူး။ နောင်ဘ၀မှာ ကျွန်ဖြစ်လိမ့်မယ်....
ဓနုဖြူမြို့နယ်တွင် တောင်သူလယ်သမားများနဲ့လယ်/ဆည်ဝန်ကြိး တွေ့ဆုံပွဲ၌ ပြောကြားခြင်း
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ထုတ် 7Day News ဂျာနယ်၊ အတွဲ (၁၁)၊ အမှတ် (၄၇)
လယ်သမားတွေ အကြွေးဆပ်နိုင်ဖို. ထမင်းတစ်နပ် လျှော.စားဖို. ၀န်ကြီးက အကြံပြုပြောကြားသွားခဲ့တယ် လို.ကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်..သူ.ရဲ.စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ. ပြောတယ်ဆိုတာ မသိပေမယ်. လယ်သမားတွေ စ၇ိတ်ချွေတာဖို. ပြောတယ်လို.တော. ယူဆပါတယ် ...မှားချင်လည်းမှားမှာပေါ. ..ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော. ၀န်ကြီးကိုယ်တိုင် တာဝန်က ခေတ္တရပ်နားပြီး ကျွန်တော်တို. လယ်သမားတွေ စီးပွားရေး ပိုင်ဆိုင်သလောက်နဲ. ၀န်ကြီးကိုယ်တိုင်လာပြီးတော. ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးဖို. ကျွန်တော်က ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်
ကိုအေးလွင်-လယ်သမား ညောင်လေးပင်မြို.နယ် တော်ပသီကျေးရွာ
The Myanmar Post အတွဲ၅ အမှတ်၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ -၂၀၁၃
ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးတွေလို အဆင်.ကျတော.လည်း ကြွေးကင်းကြမှာပေါ.နော် ..ဒါပေမယ်. တာဝန်ခံမှု..တာဝန်ယူမှု..တာဝန်ရှိမှု နဲ. တာဝန်သိတတ်မှု ဆိုတဲ့ အနေအထားအရ နိုင်ငံတော်ပိုင်းကပြန်ကြည်.ရင် နိုင်ငံတော်မှာ တင်ရှိနေခဲ့တဲ့ အကြွေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၉၀၀၀ ကျော်ဟာ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးတွေမှာပါ တာဝန်မရှိပေဘူးလားဗျာ....ဒီလိုဆိုရင် ခင်ဗျားတို.လည်း နောင်အခါ သံသရာကြွေးမပါအောင် ခင်ဗျားတို.မိသားစုနဲ.အတူ ထမင်းတစ်နပ်စီလောက်လျှော.စားပြီး နိုင်ငံတော်အကြွေးကို ၀ိုင်းဆပ်ပေးကြရင် မကောင်းဘူးလားခင်ဗျာ
မင်းယဉ်စု - ဟတ်ထိသမျှ စပ်မိစပ်ရာ
နိုင်ငံရေး အရ ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နေတယ် ...အောင်မြင်မှုတွေလည်း အထိုက်အလျှောက် ရနေပြီ ..စီးပွားရေး အရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နေတယ်..အောင်မြင်မှုတွေ အထိုက်အလျှောက် ရနေတယ်..ပြောင်းဖို.ကျန်နေတာကတော. လူတွေပြောင်းဖို.ကျန်နေသေးတယ်
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ -ကလေးမြို. တွင် ခရိုင်အဆင်. မြို.နယ်အဆင်.တာဝန်ရှိသူများနှင်.တွေ.ဆုံစဉ်ပြောစကား
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 10:39 AM
Labels: သူတို. ပြောသော ယနေ. မြန်မာပြည်
Maubin GTI GTC TU (13)
Secluded Serene Avenue of WKA (10)
စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ လက်နက် ယာဉ် စနစ်နှင်. စာစုများ (89)
ဇာတိဖွားတို.၏ လက်ရာမွန်များ (34)
ထူးချွန် ထင်ရှား ဇာတိဖွား နှင်. ထက်မြက် အောင်မြင် အနွယ်ဝင် များ (33)
နမ်လောက ဆိုင်ရာ များ (27)
နာမည်မကျော်သော်လည်း လူသိများခဲ့ကြသည် (2)
နာမည်ကျော်တွေ ဘာတွေလုပ် (61)
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအခြေခံဗဟုသုတ များ..ဂုဏ်ယူဖွယ်နှင်. စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများ (19)
မြို.လေးနှင်. ပတ်သက်ဖွဲ.သီ စာပန်းချီ (41)
မြို.လေးနှင်. သူ၏ မိတ်ဆွေများ (27)
ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း တစ်စေ.တစ်စောင်း (53)
မမေ.နိုင်စရာ ဒေသထွက် အစားအစာ များနှင်.အမေ.ထမင်း စားပွဲ (7)
သမိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ များ (19)
သူတို. ပြောသော ယနေ. မြန်မာပြည် (51)
အတွေးအမြင်.နှင်. သုတ ရသ စာစုများ (23)
အနုပညာ ရေးရာ (43)
ဧရာဝတီ၏ AFC Cup 2013 အဖွင်.ပွဲ -အဝေးကွင်းပွဲစဉ်
မျက်နှာပေါ်က အမွှေးကြောင်. X-Men နာမည်ကျော်ပြန်
သဒ္ဓါ တရား အတွက် နှိုးဆော် ချက် လေးပါ- မြသိန်းတန်ေ...
မြို.ဦး မြသိန်းတန် စေတီတော်မြတ်
၁၁ နှစ် Raping ထောင်ဒါဏ် ၄၃၁ နှစ်
ခွေးတွေရှေ.မှာ သမ်းပြ လို.တဲ့
The X Factor NZ စင်မြင့်ထက်ပေါ်က မြန်မာလူငယ်လေး ဆန်...
သီလရှင် အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
ချက်-မြန်မာ အဘိဓါန်ပြုစုပြီး ရဟန်းပြုခဲ့သူ Chez နိ...
ယခုတစ်လော နာမည်ကြီးသော ၀န်ကြီး တစ်ဥိး ပြောသမျှ နှင...
ဧရာဝတီရဲ. AFC Cup အဖွင်.ပွဲ ခရီးစဉ်
ရောင်စုံသောင်းကျန်းသူခောတ် ကထူးခြားခဲ့သော သကျမဟာသီ...
မရဏ သက်တန်. ဖား
ပုသိမ်မြို.သမိုင်းဝင် နိဂြောဓာ ဗျာဒိတ်ပေး ဘုရားလှည...
ဧရာဝတီ FC ဂိုးသမား အောင်မင်းခန်. အင်တာဗျုး
တိုက်စစ်မှုး ကျော်ကိုကို လက်ရွေးစင်အသင်းမှ ထုတ်ပယ်...
မြို.လေး က တရုပ်ပွဲ
ဘဲချောင်းရွာက ထူးဆန်းသော ကုက္ကိုလ်ပင်
တစ်ချိန်ကပြက္ခဒိန် ဘုရင်မ ၀ါးခယ်မသူ မင်းသမီး တစ်ဦး...
Red Waves မအူပင် ခရီးစဉ်
ဂမ္ဘီရ ၀ိဥာဏ် ရှင် ဟယ်ရီလင်း
၂၀၁၃ တစ်နှစ်စာ ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (၃)
၂၀၁၃ တစ်နှစ်စာ ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (၂)
ဧရာဝတီ FC နှင်. BEC Tero Sasana တို.ခြေစမ်းပွဲ
ဧရာဝတီ ရဲ. ရာသီ လာဘ်ဦး (ဧရာ ၂- ရခိုင်ယူနိုက်တက် ၀...
ရခိုင်ယူနိုက်တက် နှင်.ပွဲ ကို ဒီလိုမြင်ခဲ့ကြသည်
ချစ်သူများနေ. ...သူတို.အမြင် နှင်. လက်ရှိအခြေအနေ
ခေါက်ဆွဲတန်းလမ်း ... နာသုံးနာ...သူမတို. ၄ ဦး
မြန်မာ. ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ အချို.
၂၀၁၃ တစ်နှစ်စာ ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (၁)
ဆရာမ ဒေါ်ဥ ရဲ.ကဗျာ
၂၀၁၃ ပြုလုပ်ခဲ့သော ဦးရှင်ကြီးပွဲ
မြို.လေးရဲ. ရေကြောင်းအတတ်သင် ... ခ၀ါဆိပ် ယဉ်ကျေးမှ...
ခုတစ်လော ထွက်တဲ့ ဘောလုံးထဲက အသံများ
အချိန်တန်လို. ပြန်ခဲ့ကြရသော ခရီး
သက်မွန်မြင်. နှင်. Online Audience Choice Award 20...
အထက ၁ ၀ါးခယ်မ အမှတ်တရ ညစာစားပွဲ
သာသနာ. အာဇာနည် လယ်တီ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတဦး လာဘ်စားမှုစွဲချက် စုံစမ်းမှု ပြီးလုနီး - စီမံကိန်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်းကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်နေပြီး၊ မကြာခင်မှာတော့ ဒီ စုံစမ်း...
အသံ တိတျတိတျဆိတျဆိတျနဲ့ ကွညျ့ရှုဖို့ အကွံပွုခငျြတဲ့ “A Quiet Place” ရုပျရှငျ - အမရေိကနျ လကျဟနျခွဟေနျပွ ဘာသာစကားကို တကျမွောကျထားကွတဲ့ သူတို့တှကေ အသံ မထှကျစဖေို့ အခငျြးခငျြး ဆကျသှယျတဲ့နရောမှာ လကျဟနျခွဟေနျနဲ့ပဲ အသုံးပွုကွပါတယျ။ The pos...
သင့်ကလေးရဲ့ တစ်ကိုယ်ရည် လုံခြုံရေးအတွက် သူတို့လေးတွေကို ဘာတွေ ဘယ်လို သင်ပေးမလဲ - အခုတလောမှာ ကလေးသူငယ်တွေ နှိပ်စက်အနိုင်ကျင့်ခံနေရတာ၊ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အကြမ်းဖက်ခံနေရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြားရတာ ထိတ်လန့်စရာ၊ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူတွေကို...
ဘယ်သူပိုကိတ်လဲ ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ညိမ်းသော်နဲ့ စုလှိုင်ဝင်း
ငယ်ငယ်က ပြိုကွဲခဲ့တဲ့မိသားစုအကြောင်းကို ရင်ဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ မေသက်ခိုင်
နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်တွင် တားမြစ်ထားသည့် အဆိပ်ဖြစ်ပေါင်းသတ်ဆေးအား ထိုင်းက တရားဝင်ခွင့်ပြု - - ကမ္ဘာ့သတင်း ဘန်ကောက်၊ မေ ၂၃ ။ ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်သော အဆိပ်ဖြစ်ပေါင်းသတ်ဆေးကို နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်က တားမြစ်ထားသော်လည်း ထ...
မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာ ချေးငွေကျပ် ၃၇၅သိန်း ယူဆောင်ထွက်ပြေးမှုဖြစ်ပွား - ရေတာရှည် ၂၃-၅-၂ဝ၁၈ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရေတာရှည် မြို့နယ်တွင် မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာ ချေးငွေကျပ် ၃၇၅ သိန်းကို ယူဆောင်ထွက်ပြေးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရေ...
ရှနေ့ကွေီး ဦးကိုနီ ရနျကုနျလဆေိပျတှငျသနေတျဖွငျ့ပဈခတျလုပျကွံခံရ ၊ ရှနေ့ေ ဦးကိုနီ နှငျ့ တက်ကစီ ယာဉျမောငျး တဈဦး သဆေုံး - ရနျကုနျ ၊ ဇနျနဝါရီ ၂၉ ။ ။ ဇနျနဝါရီ ၂၉ ရကျနေ့ ယနညေ့နပေိုငျး ၅ နာရီ အခြိနျခနျ့ က ရနျကုနျ အပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျ တှငျ ရှနေ့ကွေီ့း ဦးကိုနီ သနေတျဖွငျ့ လု...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း စက်မှုဇုန် (၂) တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီး မီးလောင်မှုအဆင့်အား Level –4သတ်မှတ် -
စဈတပျအရာရှိ ဇနီး နှိပျစကျလို့ အိမျဖျော သဆေုံး - အငျးတိုငျ သံခပျြကာ တပျရငျး အရာရှိ ရိပျသာက အိမျဖျောကို နှိပျစကျလို့ သဆေုံးခဲ့မှုအတှကျ ဖမျးဆီး
နိုင်ငံခြားကြွေးဆပ်နိုင်ရည် ရှိ၊မရှိ - မေ ၂၄၊ ၂၀၁၈ - အရင်အစိုးရတွေလက်ထက်က ချေးယူထားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီတွေကို လက်ရှိအစိုးရက မကြာသေးမီက တချို့ တဝက် ပြန်ဆပ်လိုက်ပါတယ်။ အရင်အစိုးရအဆက်ဆက်က ခေ...
နမ့်စန်တွင် မိုးကြိုးပစ်ခံရ၍ လူငယ် ၂ ဦးသေဆုံး - ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်ထဲမှာ ဒီကနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက လူငယ် ၂ ဦး မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး သေဆုံးသွားပါတယ်။[...] The post နမ့်စန်...
ြဵတျးသငျ ပ္ဂဿးပ္ဗျ္ဗှင်္ှီတဿး ဝျြးတ္ဒျူးတ္လမျှ - ဝ္မျးမိူဝျှ္မုဿှ္မူိူဝ္ဒျမျြှ ပ္မိျူှုဢ္မှ္ဒျ္မျ သ္မူ္ပျ္ဓြဝျှ္ပျု္ဒြ္ဂ္မျလ္ဒျိှ္ဒု္ဂ္မျလ္ဂဿး ပ္ဂဿးပ္ဗျ္ဗြှ တှေူတှေူဝြှုဝြှု ၊ျှူုယျြ္ဒှ္မျူးလူငျဝျြျးှူုဢ္မျြှူဝျ တဿးဝြ...
Zo Minam Khantona Diing Kithutuohna Kisam Hi - A masa pen in mihingaih pien zaw cieng , ih nu ih pa leh unau sang gamatawmatam ki nei ciet hi. Tua pan kikhang toto in pilna sinna mun leh na sep si...
မြန်မာ့စီးပွားရေး အလားအလာ (A KP Appraisal) - မြန်​မာ့စီးပွား​ရေးအ​ခြေအ​နေ လူ​ပြောသူ​ပြောများလာလို့ တွက်​ကြည့်​လိုက်​ပါတယ်​… Astro Data —————– Date: 17.12.2017 (Sun) Time: 00:27:39 M.S.T Horary No. :...
ကလေးအမေ ကလေး ( ၁၁ နှစ်သမီး အရွယ် မိခင် )
ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံမှ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာ သမီးတစ်ယောက် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ် ။ သူမဟာ လက် ထပ်ပွဲ ဒုတိယ ရက်မှာ နီးစပ်ရာ ဆေးရ...
Moe Zay Nyein - မိုးဇေငြိမ်း ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ
မိုးဇေငြိမ်း ဆိုသည်မှာ....... ဒီရက်ပိုင်းနာမည်ကြီးလျှက်ရှိသော မင်းသားမင်းသမီးများ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးမှုသတင်းများကို သမီးငယ်မှ ပြော...
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ သရုပ်ဆောင် လူမင်း နှင်. နာမည်ကျော်ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်းတို. နှစ်ဦး၏ အခြေအတင် ကိစ္စ ရပ်များ ကိ...
တပ်မတော် ကြည်း /လေ အမြှောက်နှင်. သံချပ်ကာ တပ်တို.၏ ပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ.ကျင်.မှု ( အနော်ရထာ - ၂၀၁၄ )
ယခင်ထက် ပို၍ သိသိသာသာ ပွင်းလင်းမြင်သာ လာနေချိန်တွင် ၂၀၁၄ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ.က တပ်မတော်(ကြည်.း) တပ်မတော် ( လေ ) ၊ အမြောက်နှင်. သံချပ်က...
ပြီးသွားပြန်ပေါ. ဆရာကန်တော.ပွဲ တစ်ခု
တ၇ုပ်ကျောင်း @ ဈေးကျောင်း @ ဈေး အမက တွင်တက်ရောက်ခဲ့သော ကျောင်းသားဟောင်းများက မိမိတို.၏ ကျေးဇူးရှင် ဆရာအို ဆရာမအိုတို.အား ကျေးဇူးတုန်...
သက်မွန်မြင်. မယ်လိုဒီ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ချစ်သုဝေ တို.၏ မင်္ဂလာ ဓါတ်ပုံများ
ကန်တော်ကြီးပဲလေ့စ်ဟိုတယ်မှာ ကျင်းပတဲ့ သက်မွန်မြင့်နဲ့ ကိုစစ်နိုင်တို့ရဲ့ စုလျားရစ်ပတ်မင်္ဂလာလက်မှတ်ထိုးပွဲ ကိုစစ်နိုင...
Zune Thinzar - Sexy Model on Facebook ( နာမည်ကြီးချင်လို. ခုလိုလုပ်ခဲ့သည် )
From Zune Thinzar Facebook လွတ်လပ်ခွင်.ဟူသော စကားလုံး၏ ကျယ်ဝန်းနက်နဲမှုတို.က သတိထားစရာတောဖြစ်လာနေသည် ။ အထူးသဖြင်. အရှက်သိက္ခာ ကိုတ...
မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးနှင်. ဂင်းနစ်မှတ်တမ်း ဂင်းနစ်စာအုပ်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ စံချိန်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်ရာမြန်မာနိ...
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ၂၀၁၈ ဇွန်လ - သမိုင်းမှတ်တမ်းမြေအုတ်ကျောက်အုတ်တို့ သက်သေရှိသည့် ပျူတို့မြို့ပြခေတ် အေဒီ၎ရာစုမှစတွက်သော် သက်တမ်း၁၆၀၀နှစ်ကျော်ရှိသည့် မြန်မာ့မြေနေလူဦးရေသည် ယခုနှစ်တွင် ၅၃...
တာချီလိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရွှေပြည်အေးရွာတွင် အလည်လာသူကို နှင်ထုတ်မှုကြောင့် နေအိမ်မီးရှို့ ခံရ
Fujifilm Myanmar မှ မိုရီဆာကီဝင်း ကိုBrand Ambassador အဖြစ် ခန့်အပ်
Morata fuels Chelsea exit rumours after meeting Juventus director - The 25-year-old striker was photographed meeting with his former club, further fuelling speculation he could depart Stamford Bridge